Econet Wireless (PVT) Ltd. : ITU-D Sector Membership Portal
Econet Wireless (PVT) Ltd. Econet Wireless (PVT) Ltd. is Zimbabwe's largest provider of telecommunications services, providing solutions in mobile and fixed wireless telephony, public payphones, internet access and payment solutions. Econet launched its network on the 10th of July 1998. Econet had a 73% share of the Zimbabwe mobile market, with a subscriber base of four million subscribers as at February 2010. The company continues to upgrade its network to carry more subscribers, and further widen its geographical coverage, which is already the most extensive in Zimbabwe. In 2009, the network became the first operator in Zimbabwe to launch data services under 3G technology. CategoryOperatorsBased inZimbabwe (Republic of)DomainMobileITU Global DirectoryEconet Wireless (PVT) Ltd.Websitehttp://www.econet.co.zwCEO
Mr Douglas MboweniMr Douglas joined Econet (Pvt) Ltd in 1996. He was part of the team that launched the Mascom Wireless network in Botswana and Econet Wireless Nigeria (EWN) in Nigeria. He assumed various positions in Econet Wireless International before his appointment as Chief Executive Officer of Econet (Pvt) Ltd in March 2002. Among other qualifications, Douglas holds a Masters in Business Leadership (UNISA) and a BSc Maths and Computer Science degree from the University of Zimbabwe (UZ).